စာသားကို Google Lens ဖြင့်ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက်မည်သို့ပို့ရမည်နည်း Gadget သတင်း
စာသားကို Google Lens ဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက်မည်သို့ပို့ရမည်နည်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | လဲ tutorial
ဂူးဂဲလ်ရဲ့အတိုင်းအတာကိုငါတို့သိပြီးသားပါအဓိပ္ပာယ်တိုင်းမှာ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကြောင့်မွေးဖွားခဲ့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့်တိုင်၎င်းသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Google သည်၎င်း၏ search engine ၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည် ၏အသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းခြင်း အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်အတူ Google Lens တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
ယခု ဂူဂဲလ်မှန်ဘီလူးသည်သင်၏လက်ရေးကိုမှတ်မိနိုင်သည် နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း ကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ မှတ်စုများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသွားရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ Google Lens ရှိတယ် လက်ရေးစာသားကို deciphering နိုင်စွမ်းသောအဆင့်မြင့် algorithm ကိုဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့သင့်မှာတိကျပြတ်သားတဲ့လက်ရေးစာတစ်စောင်ရှိရမယ်။ သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောလက်ရေးရှိပြီးသင့်လက်ဖြင့်ရေးသားထားသောစာသားကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်ကိုသိလိုပါက၎င်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
1 ဂူဂဲလ်မှန်ဘီလူး၊ သင်၏စာသားကိုစာရွက်မှကွန်ပျူတာသို့
1.1 Google Lens ဖြင့်လက်ဖြင့်ရေးထားသောစာသားကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကူးယူပါ
အကယ်၍ ဤကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်၏အထက်တန်းကျောင်း (သို့) တက္ကသိုလ်ကာလ၌ရှိခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများတွင်နာရီပေါင်းများစွာသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ အတိအကျ, Google Lens သည်ကျောင်းသားများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောမဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပိုမိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်အပိုနှင့်အခမဲ့အကူအညီ။ ပါဝါ သင်၏မှတ်စုများ၊ မှတ်စုများသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးအပြီးသတ်စီမံကိန်းအားကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ နှင့်အစာရှောင်ခြင်း။ သင်သိလိုလျှင် ဒီကိရိယာအသစ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲပြီးရင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်တို့ကိုပြောပြမယ်။
သင်ပြုရန်ရှိသည်ကိုပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ် Google search application ကို update လုပ်ပါ ဒီဟာအလွန်မကြာသေးမီအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက။ Google Lens သည် search engine application တွင်ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ရန်နောက်ထပ် option တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အရမ်း ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Google Chrome ထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးရှိခြင်း၊ မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲလုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Google Lens ဖြင့်လက်ဖြင့်ရေးထားသောစာသားကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကူးယူပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်၏ ငါတို့ကွန်ပျူတာကို log in လုပ်ရမယ်Google Chrome ကတဆင့် ကျနော်တို့ဖုန်းပေါ်မှာလျှောက်လွှာရှိသည်သောတူညီသောအသုံးပြုသူအကောင့်အတူ။ ထို့ကြောင့် စမတ်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးမယ့်စာသားကိုကွန်ပျူတာရဲ့ clipboard မှာလွှဲပြောင်းနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့စာသားကို paste လုပ်နိုင်တယ်။
Google Lens ဖွင့်ပြီး ငါတို့ကူးချင်တဲ့စာသားကိုပဲအာရုံစိုက်တယ် ငါတို့လုပ်သင့်တယ် «စာသား»အိုင်ကွန်ကိုအသာပုတ်ပါ တူညီသောစာရွက်စာတမ်း၌ရှိလျှင်ပုံရိပ်များစွန့်ပစ်ရန်လျှောက်လွှာများအတွက်။
Al စာသား option ကိုစစ်ဆေးပါ, ထို algorithm ကိုစာရွက်စာတမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်ပုံရိပ်တွေစွန့်ပစ်။ «စာသား»ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, App ကကျွန်တော်တို့ကိုကင်မရာနဲ့တွေ့တဲ့စာသားကိုပြတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သည် ပေါ်လာတဲ့စာသားအားလုံး၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝကူးယူလိုသောစာသားရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရပါမည် « select all »ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါလုပ်နေတာ စာသားကို Google Lens clipboard တွင်ကူးယူပြီးပြီ။ ယခုသင်ရွေးချယ်သောစာသားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့ပို့ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာသားကိုရွေးပြီး၎င်းကိုကူးယူရန်နှိပ်ပါ။ လျှောက်လွှာကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်သောရွေးချယ်စရာပြသထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့ရွေးချယ်ထားသည့်စာသားများကိုလွှဲပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ပါ "ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူပါ"။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာအဖွဲ့၌လက်ရေးစာသားရှိသည် နှင့်ငါတို့ရွေးကြပြီ။
“ ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူပါ” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် enable ဖြစ်နေသည် ရရှိနိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စာရင်း။ ဒီဟာက လိုအပ်သော ကျနော်တို့ညွှန်ပြခဲ့ကြသကဲ့သို့, ငါတို့သည်ယခင်က Google Chrome သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည် ကျနော်တို့စမတ်ဖုန်းမှာ Google Lens ကိုသုံးတဲ့အကောင့်အတူတူပဲ။ ငါတို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများထဲမှကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်လာလိမ့်မည်.
ဒါကိုပြီးပြီဆိုရင်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသတင်းစကားတခုပေါ်လာလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုစာသားပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကူးယူထားသည်။ စမတ်ဖုန်းကင်မရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောစာသားကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်“ paste” command ကိုသာလုပ်ဆောင်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် browser ထဲသို့ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ text editing program သို့တိုက်ရိုက်ကူးထည့်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ desktop ပေါ်မှာလက်ရေးစာသားရှိတယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာမဖြစ်နိုင်ပါ။
သေချာတာပေါ့ ငါတို့လက်ဖြင့်စာသားကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ကူး။ မရနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့အစအ ဦး မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Google Lens သည်ကျောင်းသားများအတွက်ကြီးမားသောအကူအညီတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ပါဝါ ကွန်ပျူတာထဲမှာစာရိုက်တာကိုသက်သာစေပါ အမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့အကူအညီပဲ။ ငါတို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း သင့်တွင်အခြေခံအကျဆုံး Google tools များသာလိုအပ်သည်.
သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအလုပ်တစ်ခု အလွန်အဆင့်မြင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်မလိုအပ်ဘဲမည်သည့်စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ။ နှင့် မည်သည့်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ ဂူဂဲလ်ခရုမ်းဘရောင်ဇာကိုသင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု။ နှင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အခမဲ့ tool တစ်ခုနှင့်အတူ, ကြော်ငြာများမရှိဘဲနှင့်အရည်အသွေးကောင်း၏။ သူတို့ကိုသင်မစမ်းသေးဘူးလား။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြီးသားဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » စာသားကို Google Lens ဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက်မည်သို့ပို့ရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ။ လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကိုပြောပြပါရစေ။ ဂူးဂဲလ်ကငါတို့အရေးအသားကိုကုသပါသလား ၎င်းသည်အသံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်တူသည် (ဥပမာ - Samsung's Svoice, သင်၏အသံကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုချက်ရလျှင်သင်မသုံးနိုင်လျှင်)
သင်၏ဂျီမေးလ်အီးမေးလ်များတွင်သင်ပူးတွဲထားသောပုံများသည် Google OCR ဖြစ်ကြောင်းသိထားပြီးဖြစ်သည်။ သင့်လက်ရေးကိုအဘယ်အရာကတားဆီးသနည်း။
iOS နှင့် Android အတွက်အင်တာနက်မရှိသောအကောင်းဆုံးဘောလုံးပွဲ ၁၀ ခု